DIN-Rail L2 Maindasitiri Chinja
IS2100D (R2) Series Industrial switch inounza yakakwira-mhanyisa Gigabit Ethernet kuunganidzwa mune compact fomu chinhu uye yakagadzirirwa akasiyana mafekitori ekushandisa uko zvigadzirwa zvakaomeswa zvinodiwa. Iyo chikuva chakavakirwa kutsungirira nharaunda dzakaomarara mukugadzira, simba, zvifambiso, kuchera, uye maguta akangwara. Iyo IS2100D (R2) chikuva chakakoshawo kune akawedzeredzwa emabhizinesi deployments munzvimbo dzekunze, matura, uye nzvimbo dzekuparadzira. Aya switch anomhanya software yakavakirwa ...
IS5600G-2U / IS5600XG-2U dura 3 modular gigabit maindasitiri ethernet switch inotsigira yakazara Layer 2/3 protocols. Inopa rin'i yemukati isina basa mashandiro ayo anogona kunge ari sarudzo yakanaka yekubatanidza dura mukati mefekitori michina uye maitiro ekudzora maitiro. IS5600G-2U / IS5600XG-2U inopa matatu 8- chiteshi 1000Mbps Ethernet modular slots uye imwe 4 ports 1000Mbps / 10Gbps modular slot pane yepamberi pani. Iyo combo Giga port module inopa SFP interface yeGE / 10G uplink kana ku ...
IS5600 Series L3 Maindasitiri Swich
IS5600 yakateedzana modular gigabit maindasitiri ethernet switch inotsigira yakazara Layer 2/3 protocols. Inopa rin'i yemukati isina basa mashandiro ayo anogona kunge ari sarudzo yakanaka yekubatanidza dura mukati mefekitori michina uye maitiro ekudzora maitiro. Zvimiro uye Bhenefiti Zvikamu Zvikuru Kwete bhuroko rakazara kumhanya Layer2 / 3 kumberi Multiple Ethernet chiyero chinongedzo Mhete redundant kugona kwekupa mambure kupora. Yakasanganiswa neSNMP manejimendi software kuti ipe yakazara netw ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Kugadzirisa Mhangura Chinja
DCN CS6200-EI mhangura dzakateedzana switch dzinotevera-chizvarwa 10G inokwenenzverwa switching switch dzinopa yakamisikidzwa gigabit kuwana uye 10GE uplink madoko. CS6200-EI switch yemhangura ine advanced hardware uye software dhizaini dhizaini. Shanduko idzi dzinopa kuwanikwa kwakanyanya, kusagadzikana, kuchengetedzwa, kushanda kwesimba, uye kurerukirwa kwekushanda pamwe nezvakawanda zvakapfuma senge VSF (Virtual switch Framework), IEEE 802.3at sarudzo yemagetsi uye isina simba. Iyo yakanaka kune yakakwira-kuwanda kuwanda kana musimboti wedura ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fiber Chinja
DCN CS6200-EI fiber dzakateedzana switch dzinotevera-chizvarwa 10GbE inokwenenzverwa nzira dzekushambadzira dzinopa yakamisikidzwa gigabit Optical access uye 10GbE uplink chiteshi. CS6200-EI fiber switch ine advanced hardware uye software dhizaini dhizaini. Shanduko idzi dzinopa kuwanikwa kwakawanda, kusagadzikana, kuchengetedzwa, kushanda kwesimba, uye kurerukirwa kwekushanda pamwe nezvakawanda zvakapfuma senge VSF (Virtual switchch Framework), magetsi emagetsi anowedzera. Iyo yakanakira kune yakakwira-kuwanda kwemagetsi kuunganidzwa muFTTx mhinduro kana ca ...